Isini seGemini: Izinto ezibalulekileyo kwiGemini ebhedini - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Isini seGemini: Izinto ezibalulekileyo kwiGemini ebhedini
Isini seGemini: Izinto ezibalulekileyo kwiGemini ebhedini
Ukuqonda indlela umntu asabela ngayo kwisikhuthazo esithile, kunye nendlela abujonga ngayo ubudlelwane obusondeleyo kunokuba yinto ebaluleke kakhulu kumava okonwaba kunye nokunempilo.
I-Geminis ngokubanzi ibonwa njengamadoda nabasetyhini abanamandla amakhulu kunye namandla amakhulu, bengathethi malunga nesidingo sokuthatha amanyathelo.
loluphi uphawu lwe-zodiac onokuthi lube ngu-7
Bayazingca ngokwazi kwabo ukunamathela kwiqabane elinye nakwiqabane elinye ngonaphakade, aba bantu banamathele kakhulu kwaye banovelwano.
Yintoni ebeka iGemini ngaphandle kwazo zonke ezinye iimpawu zodiacac yeyona nto iphambili ekuhlaleni kunye nokuthetha. Xa beqala ukuba nengxoxo, uyazi ukuba iyakuba yingxoxo mpikiswano, iimpikiswano, iimpikiswano, ukugxeka kunye nezigqibo, konke kube kwiphakheji enye.
Kwaye ngokuqinisekileyo ufuna abantu abaninzi kolu hlobo lwenzame. Kucacile ke ukuba iGemini inokuba njani nenkululeko enkulu kunye nokuzimela ngokukhululekileyo xa kufikwa kwisini, okuthetha ukuba inokuphelela kubantu abaninzi ababandakanyekayo obucinga ekuqaleni.
Ukuba ngumntu ophuphayo ngakumbi kunye nophuphayo, inzalelwane yaseGemini ibonakala ngathi kunzima ukuyilawula nokuyilawula, ngokwembono yokuziphatha.
Ayikuko ukuba babeza kugoba kwiindlela ezingathandekiyo kunye neendlela ezingekho mthethweni, kodwa ukusikelwa umda kunye nokuthintela abanye abantu ekusenokwenzeka ukuba babeka endaweni, uGeminis akazange nangona kunjalo.
Banqwenela uthando nothando ngaphezu kwayo yonke into, besazi ukuba umntu uhlala ekulungele ukubanceda xa kukho imfuneko yoko.
Aba bantu bahlaselwa sisono esibulalayo, okanye ukuphazamiseka, ukuba oko kuvakala ngcono, kwaye ke kukusilela kokuncamathela ngokweemvakalelo.
Ewe, isenzo sabo sinokubonisa ngenye indlela amaxesha amaninzi, kodwa yonke into abayenzayo inenjongo ecacileyo. Ukuba banokuphuhlisa olo hlobo lokuncamathisela, isini ngokuqinisekileyo asisiyondlela yokuhamba.
Yindlela nje yokuphelisa uxinzelelo kunye nokufumana ukoneliseka. Abanye banokuba ngamava okudibanisa, kodwa uGeminis uyayibona ngendlela eyahlukileyo.
Imigaqo yesiqhelo kunye nothando lokuqala lothando azikho okanye azibalulekanga ukuba ziqwalasele kubudlelwane obusondeleyo. Endaweni yokuba, aba bantu bangabantu abahamba ngokukhawuleza abahamba phambili ukuya kubulala kwaye bachithe ixesha lokuphikisana ngeziphumo ezinokubakho.
Ukuba ukhangela into engaqhelekanga okanye iparadesi kunye neGemini, yazi ukuba ngekhe kubenjalo.
Akunabo abantu abanomdla obudala, kunjalo nje, kubo, okubaluleke ngakumbi kukuba umntu uziva njani kwaye ucinga njani ngexesha lokwenza.
Kodwa, ngenxa yobume babo kwiyantlukwano kunye nezinto ezintsha, ayisiyonto ilindelekileyo ukuba ifane xa isiza kubomi bezesondo, nangona ingekho phantsi komntu onokucinga, kodwa sekunjalo.
Yintoni ebangela ukungafuni kukaGemini ukudibana ngokweemvakalelo mhlawumbi luloyiko lokuba, nothando lokwenene olungenayo, baya kunyanzelwa ukuba babambelele kwimigaqo nemithetho engqongqo.
Hayi njengasimahla kwaye zasendle kwakhona, kunzima kakhulu kubo ukuba benze olo khetho ngesimo sengqondo sokuzola.
Nokuba bathetha ngendlela abavakalelwa ngayo okanye indlela iqabane eliziva ngayo yinto edla ngokwenzeka rhoqo, ikakhulu kuba indalo yaseGemini ijonge uthando kwindawo yokujonga ubuchopho. Isizathu, ukuqonda kunye nokubanda kuyinyani kwenza iphalethi yezixhobo.
Akukho nto iludaba
AmaGemini ngabantu abakonwabelayo okwangoku kunayo nantoni na. Abalali kwixesha elidlulileyo, kwaye abalungelelanisi izinto kwikamva elikude. Ukuhlala apha kwaye ngoku yeyona nto imnandi kwaye iyachukumisa.
Izidalwa zeminqweno emikhulu kunye nesidingo sokudibana, aba bantu bayakuxabisa ukunyaniseka kunye nokuziphatha okuthe ngqo kunayo nantoni na eyenye.
Ke, ukuze woyise umntu onje, ingayinto elungileyo ukuhamba nje nokuhamba kwaye wenze ngokungathi akukho nto inokukumisa kwiindlela zakho. Ingena kubo.
Ngaphandle kokuphakama kwengqondo yokuthinta esebenza njengeyona nto ivuselelayo, iGeminis ikwayinto entle ngaphandle kweendlela eziqhelekileyo kunye neminqweno.
Izinto ezinjengee-orgies, i-foreplay kunye ne-cosplay yimizekelo embalwa yento enokupheka le ngqondo ingcolileyo yalomthonyama. Ukuguqula isondo sibe ngumdlalo weqonga, okanye amava adlalwayo kwaye adlale indima ngokubanzi, kubonakala ngathi lukhulu kubo.
sayina indoda yanamhlanje iyakuthanda
Ngenxa yobume babo obuthandekayo kunye nezakhono zentlalontle, bahlala bechitha iimbotyi kwinto entle kakhulu kubahlobo babo.
Akukho sihloko sishibhileyo kwaye ubudlelwane obusondeleyo abuweli kolu luhlu. Nokuba kwenzeka ntoni kwigumbi lokulala, akahlali kwigumbi lokulala, ngokusisiseko.
I-Geminis ngabantu abangenakubonwa kwangaphambili, kwaye ngekhe uqikelele ukuba yintoni abaza kuyenza ngokulandelayo. Ukuxelwa kwangaphambili kukutshintsha ngokukhawuleza ekucingeni, iyantlukwano kunye nokuzithemba anokukwazi ukukwenza, kunokuhlala kothusa phantse wonke umntu.
Nangona kunjalo, ngokubanzi, lo mthonyama uya kuhlala ngokulungileyo xa efumana umntu ophilayo kwaye ukwinqanaba elifanayo kunye naye.
Nangona ithuku lidlala indima enkulu kulo naluphi na ulwalamano, oku kunjalo nangakumbi apha, njengoko iGemini inqwenela ukwahluka kunye nokwenza izinto ezintsha, nkqu nakubudlelwane obusondeleyo.
Kwaye oku ayibikho malunga neendlela ezintsha kunye nemidlalo yesondo ngokuthe ngqo, kodwa kunokuba ufikelele kwisondo esifanayo kunye nomnye umntu ngokunjalo.
Ngethamsanqa, ukuba bayonwaba kwaye baziva bekhululekile, ezo zivamvo ziyafiphala lixesha kwaye azisenampembelelo inkulu kwakhona.
Ngaphandle kwezinto ezilindelweyo
Ngelixa iGemini inokuba nobuntu obunomoya okhululekileyo obuhlala ngokungahambelani nemithetho, akaqhele ukukopela iqabane lakhe, ubuncinci hayi ngokona kungqongqo kwelizwi.
Ke, ukugcina engqondweni ukuba ungumntu oqiqayo, ubuchwephesha bokuthetha, izinto ezininzi ziqala ukuba neengcinga, zingenanto yakwenza noko okwangoku.
Ngoku, ngokubona le nto, inye into icacile, kwaye lawo ngamathuba aphezulu okuba nokuba iGemini iyakopela okanye idlale ngokungathembeki, kusenokwenzeka ukuba ibe yinto yokucinga, intelekelelo, kunokuba ibe kukukopa uqobo.
Aba bantu bathanda ukusebenzisana nabantu rhoqo. Ngokukodwa yindlela abaphila ngayo ubomi babo bonke. Izinto ngokuqinisekileyo zingatshintsha zibe mandundu ukuba iGemini ingavalwa ekuthetheni nasekuphumeni nabantu.
Kananjalo, bahlala bathabatheka kakhulu kwaye banamandla abantu, ngamanye amaxesha banamandla kakhulu kubo bonke abantu. Ukuhlala kubo ngumceli mngeni omkhulu, kodwa lowo ufanele yonke imizamo.
Umqondiso we-zodiac ngowona mdlalo ugqibeleleyo kubathandi bokwabelana ngesondo ngokwengqondo yi-Aries, ebonwa njengomntu ekukhohlisweni nasekuthandeni umzimba kungabi nazimfihlo. Ukudityaniswa kwezi zinto zimbini kunokukhokelela kwinto engenakuqondakala.
Kuqwalaselwa kuphela into nganye nganye enayo, izimo zengqondo, ubuntu kunye neendlela, apho uhlalutyo olufanelekileyo lunokwenziwa. Into ebalulekileyo kukuba akukho lunye uphawu oluhambelana neGemini kuneeAries.
loluphi uphawu lwe-zodiac ngo-Epreli-26
Ngoku, ngelixa ngokuqinisekileyo bengabonakali ukuhlala ixesha elide kubudlelwane, kungenxa yokuba kungabikho mntu ulungileyo ngokwaneleyo okwangoku.
Umntu onokuqonda ngokwenyani kwaye abone ngayo yonke into ekuqalekeni, abo banokumelana nobume babo bobuchwephesha, ngabo banyuliweyo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu xa uthetha ngeGeminis, kunye nento enika igama labo, yidichotomy phakathi kwembonakalo yangaphandle kunye ne profundity yangaphakathi.
Banokubonakala ngathi banezimvu kwaye baneentloni ekuboneni kuqala, kodwa ungenzi mpazamo, kukho enye into elele ngaphakathi kubo, mhlawumbi i-nymphomaniac, okanye uthando oluhle. Akukho nto ibonakala ngolu phawu, kwaye mhlawumbi yile nto yenza umdla kunye nomdla.
Indoda yaseGemini ebhedini: Yintoni onokuyilindela kunye nendlela yokuMvula
Umfazi waseGemini ebhedini: Yintoni onokuyilindela nendlela yokwenza uthando
I-Mercury kwi-Sagittarius: Iimpawu zoBuntu kunye nendlela ekuchaphazela ngayo uBomi baKho
Ihagu Indoda yeNkwenkwekazi yoMfazi ukuhambelana kweXesha elide
leo mntu usayina uyakuthanda
xa indoda eyi-virgo ifuna ubuye
Kutheni abantu abanomhlaza benesimo sengqondo esingaka
uphawu lomoya kunye nophawu lwamanzi
10/29 uphawu lweenkwenkwezi
indlela yokutsala umfazi we-aries
Umqondiso weZodiac kaJuni 15